DAAWO : BOOYAD SHIDAAL OO KU GUBTAY DULEEDKA GALBEED EE BERBERA | Saxil News Network
DAAWO : BOOYAD SHIDAAL OO KU GUBTAY DULEEDKA GALBEED EE BERBERA
Berbera( Saxil News.com)-Meel U dhaow Koontaroolka Dhinaca Galbeed Ee Berbera Ayaa Booyad saaka subaxnimadii shiidaal isugu jira batrool iyo naafto lagaga dhaamiyay haamaha keydka shiidaalka Berbera kuna sii jeeday dhinaca maagalada hargaysa ayaa dab ku qabsaday duleedka magaalada Berbera gaaran meel masaafo ahaan ujirta magaalada Berbera 20 kiilo mitir oo lagu magacaabo Jiifto.
Dabka booyada shiidaalka sida qabsaday ayaa ka dhashay sida la sheegay shoodh dab oo ka kacay baytariyada dabka dhaliya ee baabuurka booyada ah.
Waxaana gurmad ufidayay baabuurkan shiidaalka siday ee dabku qabsaday kooxaha dabdamiska ee haamaha shiidaalka Berbera iyo kuwa dawlada hoose ee berbera, qadarka ilaahay inkastoo qeybta hore ee baabuurka shiidalka siday shuf beeshay hadana waxa ay kooxaha la dagaalanka aafada dabka ee haamaha shiidaalka Berbera iyo dawlada hoose ku guulaysteen inay bakhtiiyaan baabuurka qeybtiisa hore iyaga oo dagaal xoogan ka galay in aanu dabku ugudbin dhinaca haayada shiidaalku kujiro ee booyada.
Inkastoo aanan gaadhin dabka oo holcaya ayaa waxa aanu goobta shilku ka dhacay gaadhnay iyada oo guud ahaan dabkii booyada qabsaday la bakhtiiyay shiidaalkii booyada kujiray oo ahaa batrool iyo naaftana uu badbaaday balse qeybta hore ee baabuurku shuf beeshay.
Qaar kamida hawlwadeenada dabdamiska ee haamaha iyo Dawlada hoose oo kawar bixiyay sida ay wax udhaceen ayaa yidhi
Sidoo kalae waxa goobta timi oo shiidalkii booyada dabku qabsaday sida lagu wareejinaayay booyad kaloo geyn doonta kaalintii shiidaalka laheyd oo hargaysa ah
Hoos Ka Daawo Muuqaalka Warkan Oo Dhaystiran